घरपालुवा जनावर | अगस्ट 2021
औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कल्याण प्रेस घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि बनाम मित्र कम्पनी, समाचार चेकआउट औषधि जानकारी समुदाय, कम्पनी समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण
खुजली रोक्नुहोस्: बिराला र कुकुरहरूमा एलर्जीको उपचार कसरी गर्ने
घरपालुवा जनावरहरूमा पनि एलर्जी हुन सक्छ। तर त्यहाँ कुकुर वा बिरालाहरूका लागि बेनाद्रील वरिपरि सुरक्षा चिन्ताहरू छन्? कुकुर र बिरालाहरू लाई मद्दत गर्न सक्ने एलर्जी औषधि यहाँ छ।
कुकुरहरूमा गठियाको उपचार कसरी गर्ने
तिनीहरूका मालिकहरू जस्तै कुकुरहरूले उनीहरूको उमेरसँगसँगै गठियाको विकास गर्न सक्दछन्। कुकुरहरूमा जोर्नीशोधीको कुनै उपचार छैन, तर तपाईं आफ्नो पिल्लालाई लक्षणहरू प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
बिरालो भएको of स्वास्थ्य लाभहरू हेर्नुहोस्
बिरालाहरू शुद्धीकरण नहुन सक्छ, तर यसले तपाईंको भलाइमा शक्तिशाली प्रभाव पार्न सक्छ stress तनाव कम गर्नदेखि लिएर एलर्जीको रोकथाम सम्म।
कुकुरहरूमा डायबेटिसको उपचार गर्ने तरिकाहरू छन्, त्यसैले तपाईको पिल्ला तपाईको छेउमा आउने बर्ष लाग्न सक्छ। यहाँ कुकुरहरू र उपचार विकल्पहरूमा मधुमेहका लक्षणहरू छन्।
चिन्ताको साथ कुकुरहरूको उपचार गर्ने बारे जान्नु के महत्वपूर्ण छ
जब तपाईंको पिल्ला डराउँदछ, कहिलेकाँही Rx मद्दत गर्न सक्दछ। यी कुकुर चिन्ता लाग्ने औषधिहरू तपाईंको स्थानीय फार्मेसीमा उपलब्ध छन्।
कुकुरको पहिलो दौड डरलाग्दो हुन सक्छ तर विरलै जीवन-धम्की दिन सक्छ। पशु चिकित्सक भ्रमणबाट के अपेक्षा गर्ने सिक्नुहोस्, कुकुरको दौडान कसरी व्यवहार गर्ने, र पालतू पशु मेडसमा कसरी बचत गर्ने।
जुलाई4को समयमा घरपालुवा जनावरहरुलाई कसरी शान्त राख्ने
कुकुर र बिरालाहरू सजिलैसँग आतिशबाजी द्वारा सजिलैसँग पाउन सकिन्छ। तपाईका घरपालुवा जनावरहरुलाई जुलाईको चौथो शान्त राख्नुहोस् यी सुझावहरूको साथ राम्ररी तयारी गरेर।
कसरी तपाईंको कुकुर स्वस्थ राख्न र कुकुर पार्कमा सुरक्षित —
समुदायहरूले खेल्ने क्षेत्रले ल्याउन सक्ने खतराबाट बच्न कुकुरहरू तपाईं माथि निर्भर छन्। केनेल खोकीबाट क्यानाइन फ्लू — कुकुर पार्कमा तपाईंको कुकुर स्वस्थ राख्नको लागि यहाँ छ।
कसरी आफ्नो घरपालुवा जनावर को दर्द को उपचार गर्न
जब तपाइँको बिरालो वा कुकुर दुखाइमा छन्, तपाइँ सबै गर्न चाहानुहुन्छ उनीहरूलाई अझ राम्रो महसुस गराउन। यी दुखाइ बिरालाहरू र निश्चित मानव मेडहरूको लागि कुकुरहरूलाई पीडा राहत प्रदान गर्दछ।
मानिसजस्तै, तपाईंको घरपालुवा जनावरहरूलाई कहिलेकाँही औषधी चाहिन्छ। के तपाईं आफ्नो पाल्तु जनावरको साथ तपाईंको मेडहरू साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ? यो र अन्य पाल्तु जनावरहरु का प्रश्नहरु को उत्तरहरु खोज्नुहोस्।
यहाँ कसरी पाल्तु जनावरको प्राथमिक उपचार किट सिर्जना गर्ने (र किन तपाइँ हुनु पर्छ)
घरपालुवा जनावरहरूको लागि प्राथमिक उपचार किटहरूमा स्थानीय फार्मेसीहरूमा उपलब्ध सामानहरू सामेल छन्। यी १२ वस्तुहरू कुकुरहरू र अन्य प्यारी साथीहरूको लागि प्राथमिक उपचार किटमा हुनुपर्दछ।
प्रोजेकमा तपाईको कुकुर राख्ने कुरा तपाईलाई के चाहिन्छ
कुकुरहरूलाई चिन्ता लाग्न सक्छ। गम्भीर मामिलाहरूमा, यसको मतलब औषधि जस्तै कुकुरहरूको लागि प्रोजाक हुन सक्छ। यदि तपाईंको पिल्ला तनावग्रस्त देखिन्छ भने, यहाँ के गर्ने।
के म मेरो घरपालुवा जनावरहरु लाई औषधीमा बचत गर्न सक्छु?
कहिलेकाँहि मानव औषधिहरु पनि घरपालुवा जनावरहरुको लागी निर्धारित गर्न सकिन्छ। स्थानीय फार्मेसीहरूमा सिंगलकेयरको पाल्तु जनावरहरू कुपन प्रयोग गर्नुहोस् र पाल्तु जनावरहरूको स on्केतहरूमा %०% बचत गर्नुहोस्।
एकलकेयरको साथ पाल्तु जनावरको औषधीमा शीर्ष १० छुटहरू
एकलकेयरले हजारौं औषधिहरूमा प्रिस्क्रिप्शन बचत प्रदान गर्दछ। यहाँ शीर्ष १० पाल्तु जनावर औषधीहरू छन् जुन तपाईं हाम्रो छुट कार्डको साथ अधिक बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
गर्भावस्था तेस्रो त्रैमासिकको समयमा मुटुको दर बढ्यो
कहिले सम्म योजना बी प्रभावी हुन सक्छ
शल्यक्रिया पछि पेटमा कुनै आंत्र आन्दोलन तर ग्यास पारित
रातमा खोकी रोक्न प्राकृतिक तरिकाहरू
accradएलर्जी र भीड १२ घण्टा
तपाईले भर्खरको के योजना बनाउन सक्नुहुन्छ बी
कसरी एक यूटीआई संक्रमण को स्वाभाविक इलाज